किन आउँछ पाद ? के हानिकारक हुन्छ ? यस्ता छन् पादबारे केहि रोचक तथ्य। - Malayakhabar
होम पेज फिचर किन आउँछ पाद ? के हानिकारक हुन्छ ? यस्ता छन् पादबारे केहि...
किन आउँछ पाद ? के हानिकारक हुन्छ ? यस्ता छन् पादबारे केहि रोचक तथ्य।
एजेन्सी := नाक तथा मुखबाट हावा लिँदा तथा छाड्दा कसैलाई मतलब हुँदैन । तर जब कसैले मलद्वारबाट हावा छोड्दछ तब यसले नजिकका मानिसलाई दिक्क पार्दछ र हावा छोड्नेलाई लज्जित बनाउँदछ । कहिलेकाहीँ अझ तिखो आवाज र नमिठो गन्ध सहित आउने यस्तो ग्यास समस्याको विषय नै बन्दछ । तर विज्ञहरुका अनुसार यसरी ग्यास छाड्नुमा लाज मान्नुपर्ने कुनै कारण छैन । यो त मानिसको पाचन प्रणाली स्वस्थ भएको संकेत हो ।
अधिकांश पटक कुनै आवाज विना नै ग्यास उत्सर्जन हुन्छ । यसरी छाडिने ग्यासमा कार्वनडाइअक्साइडको मात्रा बढि हुन्छ। यदि तपाइँले छाड्ने ग्यास तिखो गन्ध सहितको छ भने यसबाट बुझ्नुपर्छ की तपाइँले पर्याप्त फाइबर सहितको भोजन लिन पाउनुभएको छ र तपाइँको पेटमा पर्याप्त मात्रामा लाभदायक ब्याक्टेरिया छन् ।
शोधकर्ताका अनुसार केवल ग्यास छाड्नेलाई मात्र होइन ग्यास सुघ्नेलाई पनि फाइदा हुन्छ । पादमा मिसिएर आउने मिथेन ग्यास सुँघ्नाले मानिसमा विभिन्न खाले रोगको खतरा क मगर्दछ। डिमेन्सिया रोगका बिरामीलाई मिथेन ग्यासले निकै लाभ पूराउँदछ । त्यस्तै हाइड्रोजन सल्फाइड ग्यासले पनि डिमेन्सियाका बिरामीको सरिरमा लाभदायक इन्जाइम उत्पादन गर्न सहयोग पूराउँछ ।
यस्ता छन् पादबारे केहि रोचक तथ्य :
७. मध्य युगमा मानिसहरु आफ्नो पाद एउटा खालि भाँडामा पादेर भाँडालाई बन्द गरेर राख्थे, पछी त्यो पादलाई सुघ्यो भने आयु बढ्छ भन्ने अन्दबिश्वास थियो ।
२३. मानिस मरेको ३ घण्टापछी पनि पाद भने आइरहेको हुन्छ।
अघिल्लो लेख विश्वकप क्रिकेटको फाइनलमा आज अष्ट्रेलिया र न्युजिल्याण्ड भिड्दै।
पछिल्लो लेख विमानस्थलमा निःशुल्क सटल बस सेवा सञ्चालन गरिने –मन्त्री आले।